Thwebula Focus Magic 4.02 – Vessoft
Thwebula Focus Magic
Focus Magic – isofthiwe ukulungisa nokucija izithombe esilufifi of ngetakhiwo letehlukene. Focus Magic iqukethe amathuluzi zingaqinisa noma zenze buthakathaka the nokugxila enikezela nokuvulwa izinga image. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukwandisa nokucija izingxenye ezikhethiwe noma izithombe lonke. Futhi Focus Magic isekela umsebenzi ukuguqula umfanekiso black-and-white. Focus Magic isebenzisa sakugcina system imithombo futhi ine interface enembile.
Amasethingi of nokucija izithombe kufiphele
Sebenza nge izingxenye ngabanye izithombe
Amazwana on Focus Magic:
Focus Magic Ahlobene software:
Isithombe Ithuluzi elinamandla ukusebenza nge izithombe. Isofthiwe ine isethi enkulu amathuluzi ukudala, uhlele bese bakhiphe izithombe.
Isithombe Umhleli ezinamandla iqoqo amathuluzi ukusebenza ngemifanekiso. Isofthiwe imodi eyolanda nemingcele ezidingekayo imiphumela elikhulu.
Isithombe Isofthiwe ukubuka, uhlele bese ukuguqula izithombe. Isofthiwe isekela takhiwo ezinkulu ingcaca futhi ine imisebenzi eminingi ehlukene.
Isithombe Ithuluzi ukusebenza nge izithombe futhi bahlele izithombe. Isofthiwe ikuvumela ukuba uhlele izithombe, ukusebenzisa imiphumela ehlukahlukene futhi ishicilele kubo kumasevisi popular.
Isithombe Umhleli Graphic nge iqoqo amathuluzi elula ukusebenza ngemifanekiso. Isofthiwe ikuvumela ukuba usebenzise processing batch uma usebenzisa ehlunga.
Isithombe Umhleli graphic inhlanganisela yezimpawu letinengi functionalities. Isofthiwe isekela umsebenzi ngamaphrojekthi elula noma ziyinkimbinkimbi futhi kwenza ukuba uwagcine takhiwo ehlukahlukene.
Akwazi ukugcina Isithombe Isofthiwe ukudala slideshows nokuqopha imiphumela on izindilinga eziyizicaba. Isofthiwe kuhlanganisa amathuluzi ezahlukene ukuze wenze inqubo indalo.
Internet Isofthiwe nokwandisa uxhumano lwe-inthanethi. Isofthiwe uyakwazi nokwandisa ikhebuli ukuxhumaneka kwi-Wi-Fi, P2P amanethiwekhi kanye nezicelo VoIP.
English, Español, Português, العربية... doPDF 8.8.946
PDF Ithuluzi ukuguqula amafayela PDF. Uhlelo ikuvumela ukuba ukhethe izinga ukuguqulwa ifayela futhi iqukethe module of iphrinta virtual.
Hambayo The ngempumelelo indlela thwebula futhi update izicelo amadivaysi Apple. Isofthiwe kwenza ukulanda uhla izicelo ewusizo izinhloso ezinhlobonhlobo.
English, 中文, Português, Italiano... QQ 2.11 International futhi 6.4.12593 Standard